रिस्टब्यान्ड, एक प्रकारको खेल उपकरण। यो कपडाको एक टुक्रा हो जुन नाडीको जोड़लाई बचाउन प्रयोग गरिन्छ। एक नाडी ब्यान्डको पहिलो कार्य दबाव प्रदान गर्ने र सूजन कम गर्ने हो। दोस्रो हो आन्दोलन सीमित गर्नु र घाइते क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउन जोड गर्नु हो। थप रूपमा, रिस्टब्यान्ड पनि बिभिन्न RPG खेलहरूमा उपकरण प्रकार हो। यो रिस्टब्यान्ड उच्च गुणको लोचदार कपडाबाट बनेको छ जुन शरीरको तापक्रम नोक्सान रोक्न र प्रभावित क्षेत्रहरूमा हुने पीडाबाट राहत पाउनका लागि प्रयोग गरिएको भागमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ ताकि इम्प्र ...
रिस्टब्यान्ड, एक प्रकारको खेल उपकरण। यो कपडाको एक टुक्रा हो जुन नाडीको जोड़लाई बचाउन प्रयोग गरिन्छ। एक नाडी ब्यान्डको पहिलो कार्य दबाव प्रदान गर्ने र सूजन कम गर्ने हो। दोस्रो हो आन्दोलन सीमित गर्नु र घाइते क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउन जोड गर्नु हो। थप रूपमा, रिस्टब्यान्ड पनि बिभिन्न RPG खेलहरूमा उपकरण प्रकार हो।
यो रिस्टब्यान्ड उच्च गुणस्तरको लोचिक कपडाबाट बनेको छ जुन शरीरको तापक्रम नोक्सानलाई रोक्नको लागि प्रयोग गरिएको भागमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ र प्रभावित क्षेत्रहरूमा हुने पीडाबाट राहत पाउन सकीन्छ। दोस्रो, रक्त परिसंचरणलाई प्रमोट गर्ने: किनभने रिस्टब्यान्डले गर्मी सुधार गरेको कारण मांसपेशीय ऊतकहरूको अंशको प्रयोग गरेर रक्त संचार बढावा गर्न सक्छ। यो प्रभाव गठिया तथा जोड़को दुखाइको उपचारमा पनि धेरै लाभदायक हुन्छ। थप रूपमा, राम्रो रक्त परिसंचरणले मांसपेशिको मोटर फंक्शन राम्रोसँग खेल्न सक्छ र चोटपटकको घटना घटाउन सक्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण समारोह समर्थन र स्थिर गर्दै छन्। बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव प्रतिरोध गर्न रिस्टब्यान्ड र एल्बोब्यान्डले जोर्नीहरू र लिगामेन्टहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ। जोड्ने र ligaments को प्रभावी ढंगले रक्षा गर्नुहोस्। कुहिनो ब्यान्ड र नाडी सुरक्षात्मक उपकरणहरू हुन् जुन कुहिनो र नाडीलाई चोट पुर्याउनबाट बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। र सफ्ट कुशन वा हार्ड शेलहरू पनि थप्दै। उपकरणको तौल घटाउन, डिजाइनरले कुहिनो ब्यान्ड र कलाईलाई अधिक हल्का, सुन्दर, सुविधाजनक र व्यावहारिक बनाउनको लागि डिजाइन गरेको छ। यसले हात वा पाखुराको सामान्य कार्यमा हस्तक्षेप पनि गर्दैन। स्वास्थ्यको लागि भने: एक ठूलो लाभ को लागी एक सानो लगानी फिर्ता।
१. सुपर लोच, हावा पारगम्यता र पानी अवशोषण।
२. कलाई र कुहिनो घाउ रोक्नुहोस्। कलाई बलियो धुने सजिलो।
Small. सानो लगानी तर ठूलो फिर्ती।
कृपया यसलाई सुख्खा र हावामा राखिएको ठाउँमा राख्नुहोस् र ओसबाट टाढा राख्नुहोस्।
सूर्य प्रज्वलनबाट बच्नुहोस्, वा सूर्यको मुनि लामो समय सम्म राख्नुहोस्।
कृपया प्रयोग गर्दा सफाईमा ध्यान दिनुहोस्
लामो समयसम्म भिजाउन यसलाई निषेध गरिएको छ।
अघिल्लो: बुनेको हातबाट मिंक टोपी
अर्को: मल्टीफंक्शनल रिस्टब्यान्ड र कुहिनो ब्यान्ड